Zezika tsy biolojika, zezika voajanahary, pestiside - Lemandou
Mifantoka amin'ny fanondranana zezika, PGR ary fanafody famonoana bibikely ary fampandrosoana ny vokatra vaovao izahay.
Lemandou dia manana fahaiza-manao asa fanompoana feno rehefa vita ny varotra, misy ny fomba mazava handaminana ny fitarainan'ny mpanjifa.
Serivisy mandritra ny 24 ora
Misy ekipa tanora sy matanjaka manome 7 andro, serivisy 24 ora an-tserasera.
Ny masontsivana manan-danja dia arahi-maso mandritra ny fizotry ny famokarana, ary fanaraha-maso henjana no atao alohan'ny entana handao ny orinasa mba hiantohana ny kalitaony. Manohana ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo.
Serivisy fividianana fijanonana tokana
Manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ny indostrian'ny agrochemical, afaka manome serivisy fividianana tokana ny mpanjifa izahay, ary hampiasa ny fahaizantsika sy ny fahatakarana tsena mba hitsimbinana ny fotoana ilain'ny mpanjifa.